काठमाडौं । एक अनलाइनले बिहिबार नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको ६१ करोड स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणले छानविन थालेको हावादारी खबर सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई मोबाइलमा यति धेरै फोन आयो कि मोबाइल नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो । जबकि त्यो समाचारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको हवाला दिइएको भएता पनि सो विभागमा कार्यारत कुनै ... read more...
शक्ति लफडा: खुमलटार सुनसान, बालुवाटारमा सँधै चहलपहल
२०७६ साउन २ गते ११:४४
काठमाडौं । राज्यको शक्तिमा रमाउन चाहने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई अनेक थरी छट्पटाहट हुन थालेको छ । प्रचण्डले अहिले माओवादी पृष्ठभूमि भएका नेताहरूलाई आफ्नो घेराभित्र राख्न अनेकौ तिकड अपनाएका छन् । ललितपुरको खुमलटारस्थित निवासमा प्रचण्डले बिहान र बेलुका माओवादी पृष्ठभूमि भएका नेताहरूलाई बोलाएर बहसहरू गर्ने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार खुमलटारमा एमाले पृष्ठभूमि भएका नेताहर ... read more...
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका कट्टर विरोधी भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोका छोरा निकोलस मडुरो गुयरालाई खुमलटार छिराउने जिम्मा युवक संगठनका संयोजक रामप्रसाद सापकोटाले लिएका छन् । गुयरा अहिले काठमाडौंमा छन् । युवक संगठनको कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका गुयराले खुमलटारमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर अमेरिकाविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरेवापतको धन्यवाद दिनेछन् । १५ सदस्यीय टोलीको ने ... read more...
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूह सरकारका लागि विस्तारै टाउको दुखाईको विषय बन्न थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टाउको दुख्न थालेको छ । एकातिर विदेशी घेराबन्दीमा परेका, सत्ता गुमाउने त्रासमा रहेका ओली आन्तरिक संकटका कारण झन् धरापमा पर्न थालेपछि उनले फरक बाटो समातेका छन् । तत्कालका लागि आलोचनाबाट मुक्त हुन उनले विप्लव समूहसँग वार्ताको ढोका खुला गरेका छन् । उनले व्यक्तिगत हिसाबमा विप्लवस ... read more...
काठमाडौं । भारतीय जनता पार्टीले नेपाललाई हिन्दूराज्य घोषणा गर्नका निम्ति सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका नेतालाई सुझाव दिएको खुलासा भएको छ । उसले २०७३ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा धार्मिक सापेक्ष अथवा निरपेक्षा केही उल्लेख नगरी हिन्दूराज्यका लागि कसरत गर्न सुझाव पनि दिएको थियो । सो बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तयार रहेता पनि नेकपाका हालका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नमानेका कारण ... read more...
बाढी-पहिरो र डुबान क्षेत्रका जनताको उद्धारमा जुट्न काँग्रेसको निर्देशन
२०७६ असार ३० गते १४:३९
काठामाडौं । नेपाली काँग्रेसले राजनीतिक पूर्वाग्रह त्यागेर बाढी-पहिरो र डुबानमा परेका जनताको उद्धारमा जुट्न आफ्नो सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी, काँग्रेसले बाढी-पहिरो र डुबानमा परेका क्षेत्रको सरकारले गरिरहेको उद्धार तथा राहत कार्यलाई अनुगमन पनि गर्ने जनाएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दुःखमा परेका जनताको सेवामा लाग्न सवै सदस्यहरुलाई निर्देशन द ... read more...
के-के समेटियो मन्त्रिपरिषद्को ९ बूँदे निर्णयमा ?
२०७६ असार २९ गते १९:४८
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको आकस्मिक बैठकले अविरल बाढी-पहिरोलाई मध्यनगर गर्दै महत्वपूर्ण ९ बुँदे निर्णय गरेको छ । बैंठकले उद्धार तथा राहतमा सक्रिय हुन राज्यका सम्पूर्ण अंग र संयन्त्रलाई आग्रह गर्नुका साथसाथै जनप्रतिधिहरुलाई समेत पीडितलाई तत्काल सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी, विपद् प्रभावित क्षेत्रमा यातायात, खानेपानी, विद्युत र सञ्चार क्षेत्रमा अत्यावश्यक क्षेत्रहरु तत्काल सुचारु ... read more...
सप्तकोशीमा पानीको बहाव उच्च: ढोका बन्द गर्न भारतको दबाब
२०७६ असार २८ गते २२:०३
काठमाडौं । लगातार परेको पानीले सप्तकोशीमा पानीको बहाव उच्च भएको छ । एक लाख ५० हजार क्यूसेक पानीको मापनपछि खतरा मानिने आज अपराह्न २ बजेको मापनअनुसार दुई लाख ७४ हजार ६५ क्यूसेक पानीको बहाव रहेको कोशी ब्यारेजमा रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक ईश्वरी दाहालले जानकारी दिए । अहिले ५६ ढोकामध्ये ३६ ढोका खोलिएका छन् । भारतको बिहार जलमग्न भएपछि भारतले ढोका बन्द गर्न दबाब दिइरहेको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सुरेन्द् ... read more...
'पीडितलाई राहत तत्काल दिनुपर्छ, २० दिनपछि दिएर कुनै अर्थ हुन्न'
२०७६ असार २८ गते २०:१२
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले बाढी, पहिरो पीडितलाई आफ्नो दलका सांसदहरुले एक महिनाको तलब सहयोग गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘हाम्रो पार्टीको केन्द्रिय कार्यसमिति बैठक जारी छ । हामी हात फुकाएर सहयोग गर्छौं । राहत तथा उद्धारको लागि हाम्रो पार्टीको पूरै नेटवर्क परिचालन गर्छौं ।’ पौडेलले अहिले सार्वजनिक भएको जनधनको क्षतिको विवरण बाहिर आएजति ... read more...
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले विषादी चेकजाँच अहिलेपनि जारी नै रहेको स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री खनालले अहिलेपनि विषादी परीक्षण आफ्नै प्रक्रियामा भइरहेको सुनाए । नेपालमा अहिले अस्तित्वमा रहेका विषादी परीक्षण ल्याबहरुको क्षमतामा प्रश्न रहेको सुनाउँदै ती ल्याबलाई छिट्टै स्तरोन्नती गर्नेपनि उनले विश्वास दिलाए । मन्त्री खनालले अहिलेपनि जोखिमयुक्त तरकारी तथा फलफूल नगन्य मात्र ... read more...
विषादी काण्ड: 'रअ' ले रचेको चक्रब्यूहमा यसरी फसे दुई मन्त्री
२०७६ असार २६ गते ११:५३
काठमाडौं । भारतबाट आउने विषादीयुक्त फलफूल र तरकारी काण्डमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीति गर्न खोेजेको चर्चा छ । प्रचण्डले नै भारतीय राजदूतावासलाई पत्र लेखेर मातृका यादवमार्फत् विषादी जाँचको निर्णय फिर्ता गराउन भूमिका खेलेको आशंका नेकपाभित्रबाटै गरिएको छ । स्रोतका अनुसार विषादी काण्ड बाहिर आउने वित्तिकै नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीभसिंह ... read more...
गगनलाई बदनाम गराउने बेरीको आधारहिन त्यो 'प्रतिवेदन'
२०७६ असार २६ गते ११:१५
काठमाडौं । नेपालमा मात्र नभई विदेशमा समेत लोकप्रिय युवा नेताको रुपमा गगन थापाले आफ्नो छबी बनाएका छन् । उनै थापालाई यतिखेर अमेरिकी एजेन्ट भनेर सामाजिक सञ्जालमा बद्नाम गर्न सुरु गरिएको छ । पोखरा महाधिवेशनमा नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष बन्ने चाहना राख्दा पार्टीका तत्कालीन सभापति स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई ‘दरबारीया’ को बिल्ला भिराइदिएका थिए । पोखरा महाधिवेशनमा त्यतिखेर गगनको पक् ... read more...